Pregnancy – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ အမျိုးသားတွေက သုက်လွှတ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သိနိုင်ပါလား။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ဆက်ဆံတုန်းမှာ အမျိုးသားတွေက သုက်မလွှတ်ရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလား ဆရာ။ အမျိုးသားတွေက သုက်လွှတ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သိနိုင်ပါတယ်။ သုက်လွှတ်ချိန်ဟာ အထွတ်အထိပ် ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်တယ်။ ဆေးစာ (အင်္ဂလိပ်စာ)နဲ့ Orgasm...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ ငါးလရှိပါပြီ။ ဝမ်းချုပ်လိုက်၊ ဝမ်းလျှောလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဝမ်းမှန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲရှင့်။ MiMi(FB) A. တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မကြာခဏ ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းချုပ်တတ်ရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးစတာတွေကို...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သမီးအခု ကိုယ်ဝန် ၇ လ ထဲမှာပါ။ နှာအရမ်းမွှန်နေလို့ တခြားဆေးလဲ ရမ်းမသောက်ရဲပါဘူး။ အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ခါးနဲ့တင်ပါးနေရာက ညောင်းညာအားလျော့သလို ဖြစ်နေလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့ဆီက အကြံဉာဏ်လေး တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နေပါ့မယ် ဆရာ။ Cold medications အအေးမိသက်သာဆေးတွေ...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကို ရှင်းပြပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပထမသုံးလပတ်ကာလထဲက အလုံးလေးစဖြစ်မယ်။ အချင်းဖြစ်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးထွားလာမယ်။ ဒုတိယသုံးလပတ်ကာလဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၃ ပတ်ကနေ ၂၇ ပတ်အတွင်းမှာ သန္ဓေသားက အကောင်အထည်ပေါ်လာပါပြီ။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် စက်ချုပ်သင်လို့ ရ၊ မရ ….
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ စက်ချုပ်သင်လို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား။ Khaing Mie(FB) A. စက်ချုပ်သင်တဲ့အခါ အထိုင်အထ အကုန်းအကွများသလား၊ ခြေထောက်နဲ့နင်းတဲ့စက်လား ဒါတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ စက်ချုပ်တဲ့အချိန် နှစ်နာရီ-သုံးနာရီလောက်ပဲ ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် လေဆေးသောက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ . .
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ဆေးမြီးတိုတွေ၊ အထူးသဖြင့် လေဆေးသောက်ရင် မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ လေမပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလို လေဆေးသောက်တာကြောင့် ကလေးမှာ တခြားထိခိုက်မှုကော ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ A. ဆေးတွေသောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို သေချာပြောပြလိုပါတယ်။...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်တွေထဲမှာ ကံအကောင်းဆုံး ဆရာဝန်လို့တောင် ပြောလို့ရမလားမသိဘူး။ အခုလို ဆရာဝန်ဘဝကို သိပ်ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာဝန်တွေအများကြီးထဲမှာမှ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆရာဝန်ဘဝက သားသားမီးမီးလေးတွေ လောကကြီးထဲကို ကျန်းကျန်းမာမာ ချောချောမောမောနဲ့ ရောက်လာခွင့်ရအောင် ကူညီပေးခွင့်ရတဲ့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေရန်
ငွေကြယ်စင်ယံ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာကောင်းသလို ကြည်နူးဖွယ်ရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းတဲ့အချက်က ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလတာ ကာလအတွင်း ခေါင်းကိုက်တာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာသက်သာစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) များများ အနားယူပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလတာကာလအတွင်း...